Filankevitry ny tanànan’Antananarivo: Voafidy ho filoha i Andriamparany Guy Ralitera
lundi, 20 janvier 2020 13:37
Miatrika fivoriana voalohany ny mpanolotsain’ny tanànan’Antananarivo androany, ifidianana ireo mpikambana ao amin’ny birao maharitra. Telo ny kandida nifaninana ho filohan’ny Filankevitry ny tanàna dia Andriamparany Guy Ralitera narotsaky ny vovonana IRK, Andriambahoaka Faustin narotsaky ny antoko Tiako i Madagasikara. Filohan’ny filankevitry ny tanàna nandritra ny fitondran’ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana ity farany. Ralambomahay Toavina no kandida naroson’ny lisitra KOMBA, avy amin’ny Antoko Politika Madio.
Tonga avokoa ireo mpanolotsaina miisa 55 mandrafitra ny Filankevitry ny tanàna. Nahazo vato 28 ny IRK, 25 ny an’ny TIM ary 2 ny an’ny KOMBA. Fihodinana in-dray mihodina no natao. Voafidy ho filohan’ny Filankevitry ny tanàna, nahazo ny vato be indrindra i Andriamparany Guy Ralitera.
Manana mpanolotsaina 25 avy ny IRK sy TIM, 3 ny an’ny KOMBA ary 1 avy ny tsy miankina Lalatiana Ravololomanana sy Tiana Laurence Randrianantoandro. Nifidy IRK ireo tsy miankina ary namadika tsy nifidy kandida KOMBA ny mpikambana iray ao aminy raha tarafina amin’io isam-bato azon’ny kandidan’ny IRK ka nahavoafidy ho filohan’ny Filankevitry ny tanàna an’i Andriamparany Guy Ralitera io.
Mitohy amin’ny fifidianana filoha lefitra iray sy mpampakateny roa ny fivoriana tao amin’ny Lapan’ny tanàna Analakely.